Onye na-ere ọkụ kandụl Manufacturers & Suppliers - China kandụl na-ejide Factory
Hot n'ire frosted iko kandụl ite na mkpuchi
Nke a iko efu kandụl akpa nwere atọ nha nke mere na ị pụrụ ime ka dị iche iche waks iko esi ísì ụtọ kandụl.
Enwere ike ime arịa kandụl na agba dị iche iche, ị nwere ike ịhọrọ ụcha kachasị amasị gị na kaadị Pantone, anyị nwere ike ịnye gị ọrụ nlele.
Nkebi: A07M 、 A08M 、 A09M
Size: D8.2CM * H9.8CM / D9.2CM * H11CM / D10.2CM * H13.1CM
Matte frosted omenala Glass okporo ahịhịa amị diffuser kandụl Arịa
Ihunanya odo odo agba matte frosted Glass omenala esi ísì ụtọ kandụl ite / kandụl Arịa na lids
1. Ihe mkpuchi kandụl a bụ site na iko frosted na mkpuchi achara, surfacetexture dị ezigbo mma.
2. Enwere ike ime ite kandụl ahụ site nha dị iche na agba, anyị na-anabata ihe ndị ahịa na-ajụ.
3. Anyị nwekwara ike ibipụta logo nke ndị ahịa n'elu iko ahụ.
Size: 6.2cm (Obosara) * 8.1cm (Elu) 8.2cm (Obosara) * 9.8cm (Elu) 10.2cm (Obosara) * 13.1cm (Elu)
Ihe eji achọ igwe 4OZ eji achọ kandụl
N'iji aru na ihe mkpuchi igwe, ihe mkpuchi kandụl a zuru oke maka ime kandụl. Na mgbakwunye, ha pere mpe ma felata, yabụ enwere ike ibugharị gị maka ibu. Nwere ike wunye soy wax na ite a, ma tinye wick na DIY kandụl, nke na-adọrọ mmasị.
Size: D7cm * H4.9cm
Frosted matte iko efu kandụl ite arịa
Nke a matte kandụl cup bụ nnọọ ewu ewu na ndị ahịa n'ụwa nile. Anyị nwere ọtụtụ agba maka ndị ahịa ịhọrọ. A na-etinye ihe kandụl niile na mkpuchi osisi ma ọ bụ achara. Anyị nwekwara ike ịnye ọrụ ndị ahaziri maka ndị ahịa anyị, dịka ibipụta akara ụlọ ọrụ na iko ma ọ bụ na-eme mmado na ime igbe agba.
Nkebi: A02M 、 A03M 、 A07M
Size: D6.2CM * H8.1CM 、 D7.2CM * H9.1CM 、 D8.2CM * H9.8CM
Agba: anyị nwere ike ime ahaziri agba.
Efu matte iko kandụl ite
Nye sample ọrụ Mee N'onwe Gị kandụl Ndinam
Size: D6CM * H7CM
anyị na-atụ anya ịghọ gị ogologo okwu parterner na China.
nnukwu iko iko kandụl na mkpuchi achara
Reusable vasatail & Multipurpose - Clear iko ite ndị prefect size ga-eji dị ka iko ose ite, ogwu akpa, sizinin containers, nchekwa ite ， kandụl containers na ndị ọzọ arụrụ n'ụlọ onyinye Obere airtight akpa. Emere ya zụta ihe kachasị mma maka ịdịte aka na mma.
Size: D10cm * H13cm
Mkpuchi: mkpuchi achara ma ọ bụ mkpuchi osisi
frosted matte iko efu kandụl njide-champeenu / Green
frosted matte iko efu kandụl njide
Nye ọrụ nlele maka ịme kandụl
Nkebi: A03M / A07M
Size: D7.2CM * H9.1CMM: D8.2CM * H9.8CM
Multi-size doro anya Matte Frosted Glass kandụl ite na mkpuchi
Ihe na-adịgide adịgide na iko na-acha uhie uhie mara mma, mkpuchi mkpuchi osisi mbụ nwere ntakịrị isi ihe anaghị emetụta ojiji. E jiri ya tụnyere plastik, iko dị mma ma dị mma ma dịkwa mfe nhicha. Ihe mkpuchi osisi na mgbanaka akara silicone na-egbochi ikuku ịbanye, mepụta gburugburu ebe mechiri emechi ma mee ka ọdịnaya dị na ya kpọrọ nkụ.
Agba: Clear frosted
Ojiji: Ha dabara adaba ime kandụl, ịchekwa ụdị ọka niile, kuki, shuga, tii, almọnd, kọfị, ntụ ọka, ngwa nri na ihe ndị ọzọ, na-egbo mkpa gị kwa ụbọchị.
Nke a bụ iko iko kandụl na-egbu maramara nwere nha atọ dị iche iche. Mezuo mkpa gị maka ikike dị iche iche. Ọ bụ ihe ama ama n'ọtụtụ mba ma nwee ike iji kandụl wee chekwaa ihe. Anyị na-eji mkpuchi achara na-eme enyi iji meziwanye akara na ojiji ahụ.
Nkebi: A03P 、 A06P 、 A07P
Size: D7.2CM * H9.1CM 、 D11.2CM * H8.7CM 、 D8.2CM * H9.8CM
Agba: Nwa, anabatakwa agba ahaziri iche
500ml polish iko kandụl ite
multi-size sprayed polish iko kandụl containers
Nkebi: A06P / A07P / A08P / A09P
Size: D8CM * H8.1CM D9CM * H10CM D10.2CM * H12.5CM D11CM * H8CM
10oz raygba Polish iko kandụl ite na achara mkpuchi-Blue / Purple / White + Black
Spray ojii na iko, nabata dakọtara na dị iche iche lids, dị ka kaa akara mkpuchi, metalized metal mkpuchi.
Anyị na-anabata akara nzuzo na silk-biri ebi logo dị ka gị ina. Ikike na agba nwere ike ịhazi ya, zuru oke maka ime kandụl Mee N'onwe Gị.
Size: D8.2cm * H9.8cm
Na mbụ, anyị nwere akwụkwọ n'okpuru ọkọlọtọ Euro. Kandụl anyị dị mma maka ọkọlọtọ ndị Europe, yabụ ikwesighi ichegbu onwe gị gbasara kandụl anyị. Anyị na ngwaahịa na-exported ọtụtụ mba na mpaghara, dị ka United na-ekwu, Russia, Europe, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ, wdg Ha na-ọma natara site na ndị ahịa n'ụlọ na mba ọzọ.
N'akụkụ aka nke ọzọ, anyị iko kandụl njide na-eji na elu-edu ngwaọrụ na eco-enyi na enyi glassware, nke bụ maa bụghị usụhọde iko na agaghị emerụ ndị mmadụ. E nwere ọtụtụ ụdị iko iko kandụl maka nhọrọ gị, dị ka ite iko iko, ite mmiri, ite iko squire, pudding iko kandụl, yankee, iko ite, wdg.
Ọzọkwa, iko iko kandụl ite nwere ike dị iche iche utịp, dị ka matte, frosted 、 egbu maramara 、 spraying. Nwere ike ịhọrọ mmetụta ịchọrọ. N'ezie, ọ bụrụ n'ịchọrọ ibipụta akara aka gị ma ọ bụ akara gị na iko iko ahụ, anyị nwekwara ike ịme. Naanị ị ga-ezitere anyị atụmatụ gị, anyị nwere ike ịnye gị nsụgharị maka nrụtụ aka.
Na mgbakwunye, ị nwere ike ịhọrọ mkpuchi dị iche iche maka ngwongwo gị. Anyị nwere mkpuchi achara lid mkpuchi osisi lid ihe mkpuchi ọla, nke mara mma na ite iko.
Ikpeazụ, gbasara mbukota, anyị na-eji ikuku ikuku afụ akpa iji kechie iko kandụl iko iji zere mmebi n'oge njem. Anyị ga-echebe ngwaahịa ndị kachasị ike, ka ngwaahịa ndị ahụ wee nwee ike ịnye ndị ahịa nsogbu.
Ndị a bụ ụfọdụ ihe ọma ndị ahịa anyị kwuru: